I-Transistor: Bamba kwaye usasaze iiPodcasts zeShishini lakho Ngeli Platform yePodcasting | Martech Zone
Omnye wabathengi bam sele esenza umsebenzi oncomekayo ekuxhaseni ividiyo kuyo yonke indawo yabo nakwiYouTube. Ngaloo mpumelelo, bajonge ukwenza ixesha elide, udliwano-ndlebe olunzulu kunye neendwendwe, abathengi, kunye nangaphakathi ukunceda ukuchaza izibonelelo zeemveliso zabo. IPodcasting lirhamncwa elahlukileyo xa kufikwa ekuphuhliseni isicwangciso sakho… kwaye ukusingathwa kwayo kwahlukile nako. Njengoko ndiphuhlisa isicwangciso sabo, ndibonelela ngesishwankathelo:
evakalayo - uphuhliso lwe-intros, i-outros, kunye neefowuni-kwisenzo esinokuqhutywa kwi-podcast.
Iziboniso -Uphuhliso lomfanekiso wakho wepodcast kunye nemifanekiso yesiqendu.
umxholo - uphuhliso lwekhalenda yomxholo kunye neembono zokuxhasa imibuzo ephezulu kunye neenkxalabo ezinxulumene nemveliso yazo. Oku kuquka iingcebiso zeendwendwe kunye nophando lomntu wesithathu ukwabelana.
ukusingatha -Iiseva zepodcast zilungiselelwe ukusasazwa kwemithombo yeendaba, ngoko ke ukhetha ekulula ukuyisebenzisa, eyomeleleyo, ethembekileyo, iqonga lokubamba ipodcast ibalulekile kwimpumelelo yakho. Abanye banikezela ngabadlali abamangalisayo.
Umanyano – Umamkeli wakho kufuneka abe nazo zonke izinto eziyimfuneko zokwenziwa kwesondlo thengisa ipodcast ukusasaza umxholo kubalawuli bepodcast kunye namaqonga eemowuli emveli.
Uhlalutyo -Izicelo zohlalutyo lwePodcast kuzo zonke iisayithi zakho ezisasaziweyo ubuyela eqongeni ukuze ubonise izicelo ezipheleleyo kwaye umamele.
Ezi mpawu kanye kutheni ungafuni nje ukusebenzisa umndilili wenkonzo yokubamba iwebhusayithi ukulawula ipodcast yakho. Ukufumana iqonga elikhulu lokubamba ipodcast kubalulekile… kwaye siyathanda ITransistor!
ITransistor inikeza ukusingathwa kwepodcast, ukuthengiswa, kunye nohlalutyo lwamawaka emibutho, iimveliso, kunye nabayili kwihlabathi liphela. Iqonga laqalwa ngabachwephesha beepodcasters ababone ithuba lokwakha iqonga elibanzi. Nantsi isishwankathelo seqonga:
Iimpawu eziphambili zeqonga esikholelwa ukuba zilenza libe likhetheke iqonga lokubamba ipodcast zezi:
Iipodcasts ezingenamkhawulo – iipodcasts ezininzi iinginginya zihlawulisa umboniso ngamnye… ngeTransistor unokuba nemiboniso emininzi njengoko ungathanda kuzo zonke iinketho zabo zamaxabiso.
Iipodcasts zabucala -Amashishini ahlala efuna ukwabelana ngeepodcasts zabucala kwaye iTransistor ikuvumela ukuba ulawule abo babhalisile.
IWebhusayithi eyakhelwe-ngaphakathi - akukho mfuneko yokwakha enye indawo yepodcast yakho, iqonga labo linenkqubo yolawulo lomxholo ebandakanyiweyo.
Umdlali wePodcast -Ifakela ngokulula umdlali omhle wepodcast kwezinye iisayithi… kwaye bayaxhasa isakhono sika-Twitter sokushumeka umdlali kanye kwiiposti zakho zikaTwitter.
Ukufakwa kweeDynamic Ad - kuba ezo fowuni zibalulekileyo-kwisenzo okanye ubonise abaxhasi.
Amalungu eQela elongezelelweyo – ube neqela elisebenza ekupapasheni umboniso wakho? Bafake njengabasebenzisi abongezelelweyo kwiakhawunti yakho.
Syndication Tools -Yenza kwaye udibanise ipodcast yakho ngezixhobo zabo ezizinzisiweyo. Bade babonelele ngokucofa oku-1 kwiSpotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Breaker, Player FM.
IiNjini zoPhando zePodcast-cofa i-1-submussion ukuze uphulaphule amanqaku kunye ne-Podcast Index.
Ukubika -Ilula, ingxelo edityanisiweyo kuyo yonke imiboniso yakho, iziqendu ezibandakanya konke ukumamela.
ITransistor inazo zonke ezinye izixhobo zakho ezinikezelweyo kujongano lomsebenzisi oluhle olulula ukuyisebenzisa kwaye uqalise ipodcast yakho ukusuka.
Bhalisela uvavanyo lweentsuku ezili-14 zasimahla zeTransistor
Ukubhengezwa: Ndililungu le ITransistor kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibanisa kulo lonke eli nqaku.
tags: apileApple PodcastsUmhluliuphandoGoogle Podcastsmamela amanqakuumdlali fmpodcastIPodcast Addictukusasazwa kwepodcastukusingathwa kwepodcastisalathisi sepodcastingxelo yepodcastInjini yokukhangela yepodcastUkudityaniswa kwepodcastHilltownspotify iipodcastsisalathisi sepodcastumtshintshi